यो कस्तो अनौठो प्रतिभा ! ६ बर्षिय नानुको आवाजले १६ मिनट सम्म भाबुक बनायो – भिडियो – Complete Nepali News Portal
यो कस्तो अनौठो प्रतिभा ! ६ बर्षिय नानुको आवाजले १६ मिनट सम्म भाबुक बनायो – भिडियो
पछिल्लो समयमा अत्यन्तै भाइरल भएकी ६ बर्षे जिया भुसाल संग को बिशेष भिडियो को साथ् मा स्कटनेपाल संग गरिएको बिशेष कुरा कानी ।
उक्त भिडियो मा जिया आफ्नो बाल प्रतिभा लाइ बाहिर निकालेकी छन् । हुन् त जिया भुसाल पछिल्लो समयमा निकै नै भाइरल भएको सबैलाई जानकारी नै छ फेरि पनि यस उक्त भिडियो मा एक फरक प्रस्तुति सहित जिया आफ्नो प्रतिभा सबर्जनिक गरेकी छन् ।
उनको मन छुने बाल प्रतिभा लगायत भबिष्यमा उनि गायिका बन्ने पनि हामी लाइ जानकारी गराइन ।
पुरा भिडियो हेर्नको लागि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस |